Valin’ny fanontanian’ireo Loholona nandritry ny fihaonany tamin’ny Governemanta ny 12 jona 2017 |
Valin’ny fanontanian’ireo Loholona nandritry ny fihaonany tamin’ny Governemanta ny 12 jona 2017
LOHOLONA : GEORGES
Ne serait-iI pas nécessaire de construire des petits quais pour les petits bateaux et botry à Morombe pour soulager la route Morombe – Toliara ?
N’y aura t-il pas un port Minéralier à Toliara pour ses produits miniers, gazeux et pétroliers ?
Madagasikara dia manana seranan-tsambo 17 sy toerana voajanahary maromaro ahafahana miantsona sy manorina fotodrafitr’asa handraisana ireo karazan-tsambo toy ny botry. Anisan’ireny ny ao Morombe. Ny Ministera amin’izao fotoana izao dia eo am-pametrahana ny drafitra maharitra ho fampandrosoana ny seranan-tsambo eto Madagasikara (Schéma directeur de développement des ports).
Io drafitra io dia mamaritra ny fandaminana sy ny paik’ady rehetra amin’ny fanorenana, fanatsarana sy fanitarana ny seranan-tsambo eto Madagasikara. Koa miankina amin’ny vokatry ny fanadihadiana ny fandaharana ny asa atao amin’ny fotodrafitr’asa andraisana sambo na lakana madinika.
Tafiditra anatin’io koa ny seranana voatokana ho an’ny harena an-kibon’ny tany.
Quand est-ce qu’on va faire l’extension du port de Toliara ?
Ankehitriny, ny Ministeran’ny Fitaterana sy Famantarana ny Toetr’andro dia manao ireo dingana rehetra ilaina amin’ny fanitarana ny seranan-tsambon’i Toliara mba hifanaraka amin’ny filàna ateraky ny fivoaran’ny fitaterana an-dranomasina. Isika izao dia efa miroso amin’ny fakàna ny fankatoavan’ny Gouvernemanta ny hanaovana fifanaraham-piaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina mba hanaovana io fanitarana io. Marihina fa mitaky vola be izany fanitarana izany ka io fiaraha-miasa io no manamora ny fanaovana azy. Mandritry ny filan-kevitry ny Ministra izay atao any Toliara dia efa misy fampitam-baovao mikasika io seranan-tsambo io haroso.
Faniriana ny hanombohana ny asa amin’ity taona 2017 ity saingy miankina amin’ny fanatanterahana ireo pitsopitsony eo amin’ny lafiny teknika sy ny lalàna ny hirosoana amin’izany.
Mitaky fotoana sy miankina amin’ny zavatra maro ny fanaovana ny fanitarana io seranana io, koa raha ny mahakasika ny fanitarana ny seranan-tsambo ao Toamasina no atao tombana dia efa tamin’ny taona 2008 isika no nanomboka ny fanadihadiana ara-teknika ka izao vao ho tanteraka ny vinavina. Isaorana etoana ianareo tamin’ny fandaniana ny lalàna mikasika ny findramam-bola ho fanitarana io seranana io.
LOHOLONA : THU – JAUNE Horace Mann
Aiza ho aiza ny fanatanterahana ny « Gare routière » any amin’ny Distrikan’i Vangaindrano ? Satria efa nisy solontena avy aty amin’ny Ministera tonga nijery izany tao Andriamatoa Ministra.
Ny “Gare routière” any amin’ny Distrikan’i Vangaindrano dia ao anaty ny fandaharan’asan’ny Ministera tokoa amin’ity taona ity.
Efa eo am-pikarakarana ny fanaovana ny tolo-bidy amin’izao fotoana izao.
Ny fametrahana ny vato fehizoro dia amin’ny volana aogositra 2017.
LOHOLONA : BOTOMANOVATSARA
Aiza ho aiza Andriamatoa Ministra ny resaka “PROJETS” mahakasika ny “PORT” sy ny LALAMBY ao Manakara izay voalaza fa iarahana amin’ny Orinasa Sinoa SOGECOA?
Nisy tokoa ny fiaraha-miasa natao niaraka tamin’ny SOGECOA kanefa tsy nahitam-bokatra izany. Dia izao mitady fiaraha-miasa amin’ny CHINA RAILWAYS INTERNATIONAL izao indray.
Izany fiaraha-miasa izany dia mahakasika ny “Projet de rehabilitation” ny zotra FCE sy MADARAIL izay handinika ny fanamboarana ny foto-drafitr’asa sy ny fitaovan-dalamby (loco-wagon, voitures à voyageurs, draisine, outillages, etc …)
Eo amin’ny « Etudes de faisabilité » io tetik’asa io izao.
LOHOLONA : Johary RAJAOBSON
Fangatahana fanazavana mahakasika ny partenariat stratégique AIR MADAGASCAR – AIR AUSTRAL
Latsaka an-katerena ny AIR MADAGASCAR ka voatery nitady orinasam-pitaterana an’hanabakabaka (Compagnie) hanampy sy hanaisotra azy amin’ny fahasahiranana.
Inona avy ireo tombontsoa ho entin’izany fiaraha-miasa vaovao izany ho an’ny orinasa AIR MADAGASCAR ?
Hitondra vola 40 Millions $ ny AIR AUSTRAL, izay hanome aina sy ainga vaovao ho an’ny kaompania AIR MAD satria hiova sy hiampy ary hihatsara ny fiaramanidina.
Afaka 3 taona dia hiverina amin’ny laoniny ny kaontim-pitantanana satria ny salan’isan’ny tombom-barotra madiodio dia 4.6%, izay manome 426 Millions $.
Io fiaraha-miasa amin’ny Air Austral io koa dia fiaraha-miasa mitovy na « partenariat d’égal à égal ». Noho izany dia mihamantanjaka ny kaompania AIR MAD, indrindra amin’ny sidina eto an-toerana sy ny nosy manodidina na « régional ». Izany dia hamerina amin’ny lazany sy ny tanjany ny kaompaniam-pitaterana Malagasy, izay nanana ny toerany maha-izy azy indrindra teo amin’ny nosy manodidina.
LOHOLONA : BENESSY Harisson Sébastien
Simba ny lalana fikorisan’ny fiaramanidin’ ny seranan’ny Toamasina (piste). Rahovina no hamboarina satria seranam-piaramanidina iraisam-pirenena izy io ?
Efa mizotra tsara ny fifampiresahina amin’ny mpamatsy vola, mahakasika ny fanamboarana ny seranam-piaramanidin’ny Toamasina, izay mitentina eo amin’ny 4 Millions $. Tsara ho marihina, fa tsy Toamasina irery ihany no voakasiky ny fanamboarana, fa hiisa 10 ireo seranana izay hisy fanatsarana sy fanamboarana.
LOHOLONA : RAVONINAHITRINIARIVO Mbade Jeannine
Andriamatoa Ministra, miharihary tokoa ny faharatsian’ny lalana ato amin’ny faritra Betsiboka ankoatra ny lalam-pirenena faha 4 iny. Ny lalam-pirenena faha 33 A mankany Tsaratanàna ohatra, dia hita fa lalan-dririnina ihany ny lalana, fa rehefa fahavaratra dia andro vitsivitsy no isaina, ary sarety no fitaovam-pitaterana fa tsy afaka na dia fiara tsy mataho-dalana aza.
Efa nisy ny resaka nifanaovantsika Andriamatoa Ministra, koa dia manantena izahay fa fotoana tokony hijerena azy izao. Torak’izany koa ny mankany amin’ny distrikan’ny Kandreo, lalam-pirenena faha-33 iny, singanina manokana ny fangatahana lakana amin’Andriamatoa Ministry ny Fitaterana hampitohy amin’ireto kaominina sy fokontany ireto : AMBALIHA sy TANIMBARIMBE ary ANDREBABEBY ao Kandreo.
Marihina fa ny Ministeran’ny Fitaterana sy Famantarana ny Toetr’andro dia mandrindra ny fitaterana an-tanety sy ireo zotram-pitaterana samihafa, fa ny fanamboarana ny lalam-pirenena kosa dia ny Ministeran’ny Asa Vaventy no misahana izany.
Mahakasika ny fangatahana lakana indray dia efa eo am-pijerena izany ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny.
LOHOLONA : RANDRIANANTENAINA Lucien Luc
Mangataka ny famerenana ny « vol direct » mampitohy an’ny La Réunion-Taolagnaro – La Réunion.
Efa eo am-panantaterahana : amin’ny taona 2018 no ho azo ny fanamarinana hahafahana mandray ny fiaramanidina iraisam-pirenena (certification) eo amin’ny seranan’ny Taolagnaro.
Havaozina arak’izany koa ny fifanekena amin’ny fifamoivoizana an’habakabaka (accord aérien) amin’ny firenena roa (Frantsa sy Madagasikara) mba hampaharitra ny fisian’ ny sidina La Réunion –Taolagnaro – La Réunion.
Azo atao ve ny mampisy ireo fanamboarana ny « Permis sy carte grise biométrique » any amin’ny Faritra?
Iangaviana mba handefa ny fangatahana any amin’ny Ministeran’ny Ati-tany sy ny Fanampariaham-pahefana.
LOHOLONA : TOTOBENAZARA Jean Luther
Mangataka ny hanampiana mba ho indroa isan-kerinandro farafahakeliny ny sidina mampitohy an’ny Sambava sy Antsiranana.
Noho ny tsy fahampian’ny fiaramanidin’ny Kaompania AIR MAD no tsy nahafahana nanantanteraka izany teo aloha.
Fa amin’izao fiaraha-miasa miaraka amin’ny AIR AUSTRAL izao dia azo heverina ny fanatanterahana izany, izay miankina indrindra ihany koa amin’ny tolotra sy ny tinady.
LOHOLONA : RATONGAVELONAHARY Modeste
Ombako manana ny fangatahana nataon’ireo Députés namana momba ny FCE sy ny Port ary ny Aéroport. Manakara no “Carrefour incontournable” ho an’ny Grand-Sud-Est ka tokony tsy asiana hatak’andro fa dia atao farany izay haingana.
Efa nisy projet de réhabilitation ny zotra Fianarantsoa Côte-Est miaraka amin’ny Orinasa Sinoa CHINA RAILWAYS INTERNATIONAL GROUP handinika ny fanamboarana ny foto-drafitr’asa sy ny fitaovan-dalamby (loco-wagon, voitures à voyageurs, draisine, outillages, etc…) Eo amin’ny « études de faisabilité » io tetik’asa io amin’izao fotoana izao.
LOHOLONA : ABDIRASSOUL Mohamed Mourad
Iaraha-mahalala ny toerana misy ny fitaterana ao amin’ny sehatra EKONOMIKA. Tsy mazava amin’ny vahoaka anefa ny tanjona napetrakareo sy ny vokatra andrasana amin’izany.
Azonareo velabelarina ve izany?
Inona ny olana hatrehinareo ary inona ny vahaolana hitanareo ?
Ireo vita tamin’ny taona 2016
Avy amin’ny fampiarana ireo paik’ady ireo dia azo fintinina toy izao ny zava-bita tamin’ny taona 2016. Ny fotodrafitr’asa sy ny fitaovana no tena mibahan-toerana satria izany no miantoka ny kalitaon’ny fitaterana sy ny fampiroboroboana azy
Fanatsarana ny seranan-tsambo (quai) ao Mananjary (280 000 000 Ar)
Fanadihadihana ny fomba fiarovana ny sisin-drano ao Masomeloka (Canal des Pangalanes) (105 000 000 Ar)
Fanadihadihana ny fomba fanatsarana ny fiantsonan’ny lakana madinika ao Mahavatsy Toliara (25 000 000 Ar)
Fanamboarana toeram-piantsonana ao Loukintsy (Sainte Marie) (117 000 000 Ar)
Amin’izao fotoana izao dia azo sokajiana toy izao ity seha-pitaterana ity eto Madagasikara :
7 / 17 seranan-tsambo misokatra amin’ny fitaterana makany ivelany
7 millions de tonnes isan-taona
209 000 EVP (Equivalent Vingt Pieds) isan-taona
450 sambo isan-taona
11,80 eo amin’ny taham-pifandraisan’ny CNUCED (Indice de connectivité) laharana 85 amin’ny firenena 137 (85ème /137 pays)
Fividianana fitaovana hanoloana ny simba (acquisition de pièces détachées)
Fanatsarana ny tetezana (Viaduc) ao Sahasinaka (famatsiam-bola avy amin’ny Union Européenne)
Fanatsarana sy famefena ny tobim-piantsonana ao Sahasinaka
Fanatsarana ny tafo ao amin’ny tobim-piantsonana ao Manangareza
Fanatsarana ny tafon’ny toeram-pikojakojana fitaovana amin’ny tobim-piantsonana ao Soarano
Fanatsarana ny tobim-piantsonana ao Brickaville
Fanamboarana tetezana PK 240+800 zotra TCE
Fampiakarana ny taham-piarovana amin’ny afo sy fametrahana ny aro-fanina ilaina amin’ny atoandro ao seranam-piaramanidina
Fanamboarana ny fefin’ny faritry ny seranana sy fanatsarana ny fiantsonana
Fandoavana ny tambim-bidin’ny faritra nanesorana ireo olona nipetraka teo amin’ny seranan’i Nosy-Be sy Morondava.
Fanadihadihana momba ny fanamboarana Gare routière ao Toliara
Fanamboarana Gare routière ao Fianarantsoa
Fanaovana atrik’asa sy asa fanairana ary fampahafantarana momba ny aro lozan’ny fifamoivoizana
Sakana sy olana atrehana
Ny olana fototra amin’ny fanatanterahana ny asa dia ny tsy fahampian’ny hoenti-manana hanatsarana ireo fotodrafitr’asa sy fitaovana ampiasaina indrindra ny amin’ny fitaterana an-dalamby.
Noho io tranga io dia voatery isika hamaritra ny laharam-pahamehana ny amin’ny fanatsarana na fanitarana ny fotodrafitr’asa izay tena mitaky famatsiam-bola goavana.
Ankoatrin’io olana lehibe io dia eo ny olana madinidinika manakana ny fanatsarana ny fitaterana toy ny :
Olana ara-toetr’andro izay miteraka fiatohan’ny fitaterana ( tetezana tapaka, fihotsahan’ny tany, sns.…)
Olana amin’ny fananan-tany
Tsy fisian’ny lalàna manokana mifehy ny fitaterana entana amin’ny maha seha-pihariana azy
Tsy fitovian-kevitra momba ny andalana vitsivitsy amin’ny lalànan’ny fifamoivoizana,
Fanafoanana ny naoty manakana ny fitondrana fiarakodia manana familina ankavanana.
Ho an’ny taona 2017, ny Ministeran’ny Fitaterana sy Famantarana ny Toetr’andro dia manana vina ny hanao ireto asa manaraka ireto :
Fametrahana ny politika momba ny fitaterana an-dranomasina.
Fampiroboroboana ny fitaterana an-dranomamy,
Fanangana seranan-tsambo manana halalina ambony amin’ny ilany andrefan’ny Nosy ;
Fametrahana ny drafitra maharitra ho fampandrosoana ny seranan-tsambo eto Madagasikara (Schéma directeur de développement des ports)
Fametrahana zotra an-dranomasina mampifandray an’ny Afrique sy Madagascar
Fanohizana ny fanatsarana ireo fotodrafitr’asa
Fanavaozana ampahan’ny lalamby 20km eo ho eo (Fianaranatsoa Côte-Est)
Fanatsarana sy famefena ny tobim-piantsonana telo
Fividianana draisine, locomotive (une), voiture voyageurs,
Fanavaozana tanteraka (révision générale) ny Micheline
Fanatsarana ny fotodrafitr’asa
Fanamboarana ny tetezana PK 215+700 zotra Antananarivo – Toamasina izay tapaka tamin’ny fandalovan’ny rivo-doza ENAWO
Fanadihadiana ara-teknika (géotechnique) ho an’ ny fandraisana fiaramanidina salantsalany B737 ao amin’ny seranan’ i Maintirano, Mananara, Maroantsetra.
Fandrafetana ny tetika hanajariana ny tany sy ny fananan’ny seranam-piaramanidina : Toliara, Tolagnaro
Fanamboarana ny fiantsonana (piste) ao Maroantsetra.
Fametrahana ny fefy mamaritra ny seranan’i Mahajanga
Fanalana ireo olona mipetraka tsy ara-dalàna ao anatin’ny faritry ny seranan’i Nosy-Be sy Sainte Marie
Fampiharana ny politikan’ny fitaterana an’habakabaka.
Fanohizana ny fandinihana sy fanitsiana ny didy fampiharana ny lalàna mifehy ny politikan’ny fitaterana an-tanety sy fanatsarana ny lalàna mifehy ny fitaterana an-dalambe.
Fametrahana toby fiantsonan’ny fiarakodia mitondra mpandeha
Fametrahana lalàna mifehy ny fitaterana entana.
Fanamboarana toby fiantsonan’ny fiarakodia mitondra entana
Fanohizana ny fanamboarana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana
Fanaraha-maso ny fampiharana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana (tsy fitondrana fiara raha mamo, fitaratra miloko matroka, …..),
Fanaraha-maso ny fiasan’ireo sampam-mpampianarana familina fiarakodia
Fanofanana mpanadina amin’ny fanomezana alalana hitondra fiarakodia
Fanohizana ireo asa fanairana ary fampahafantarana momba ny aro lozan’ny fifamoivoizana
Ny fitaterana an-dalamby dia efa azo lazaina fa mihena am-pitoerana toa fen’antitra. Kanefa eran’izao tontolo izao dia mampiasa ary mampitombo azy io.
Nahoana isika no tsy mieritreritra hanao “modernisation” sy hampitombo (extension) io fitaterana an-dalamby io eto Madagasikara ? Sady hampihena ny fahasimban-dalana (route nationale) io politika io no hampihena ny accident de la circulation. Etsy ankilany dia hampitombo ny « trafics » no hampihena ny « coût de transport des marchandises » ary indrindra indrindra hampitombo ny fizahan-tany.
Inona ny misakana ?
Anisan’ny laharam-pamehana ifotoran’ny Ministera tokoa ny fanatsarana ny fitaterana an-dalamby eto Madagasikara. Mitentina 850 millions $ ny teti-bidy mifandraika amin’ny tetik’asa fanarenana ny fotodrafitr’asa sy fanavaozana ireo fiaran-dalamby, izay nentina tao amin’ny Conférence des Bailleurs tany Parisy tamin’ny volana Desambra 2016.
Efa maro ireo mpamatsy vola namaly ny antso ary efa an-dalana ny fifanakalozan-kevitra ny amin’ny fanatanterahana izany.
Misy ihany koa ny “etudes” mahakasika fanorenana zotram-pitaterana an-dalamby vaovao (Valée des Mines).